कञ्चनपुरका सिडिओलाई गृहले तानेपछि चर्कियो विवाद, स्थानीय विरोधमा - Everest Dainik - News from Nepal
कञ्चनपुरका सिडिओलाई गृहले तानेपछि चर्कियो विवाद, स्थानीय विरोधमा
काठमाडौंः कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नुरहरि खतिवडालाई गृह मन्त्रालय तानेपछि विवाद चर्किएको छ । गृहले खतिवडालाई मन्त्रालय तानेर उनको स्थानमा रामकुमार महतोलाई पठाएको छ ।
कञ्चनपुरका सिडिओ खतिवडालाई गृहले आकस्मिक रुपमा तानेपछि विवाद चर्किएको हो । त्यसको स्थानीय रुपमा विरोध शुरू भएको छ ।
कञ्चनपुरमा पर्ने गौरीफन्टा नाकाको यसअघिसम्म कैलालीले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर, एक साताअघि कञ्चनपुरका सिडिओ खतिवडाले गौरीफन्टा नाकाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै त्यहाँ कञ्चनपुरका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थिए । त्यसको कैलालीमा विरोध र कञ्चनपुरमा स्वागत भएको थियो ।
आफ्नै जिल्लामा रहेको नाका व्यवस्थित गर्दा सिडिओको आकस्मिक रुपमा सरुवा गरिएको भन्दै त्यसको कञ्चनपुरमा विरोध शुरु भएको हो । नेकपा कञ्चनपुरका अध्यक्ष विर बहादुर थापा खतिवडाको आकस्मिक र अस्वभाविक रुपमा सरुवा गरिँदा विरोध शुरू भएको बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘सिडियोको सरुवाको विरोध हैन । तर, कञ्चनपुरका सिडिओले आफैं जिल्ला भित्रपर्ने नाकाको व्यवस्थापन गर्छु भन्दा जसरी उहाँको सरुवा गरिएको छ, त्यो ठिक भएन भन्ने हो । सिडिओले राम्रो काम गर्नुभएको हो । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो कारवाही गरेर सरुवा गरियो ।’
याे पनि पढ्नुस आजदेखि देश नै ‘लकडाउन’: के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
उनले गौरीफन्टा नाका सुरक्षाको जिम्मा कञ्चनपुरले नै पाउनुपर्ने माग गरे । खतिवडाको सरुवामा राजनीतिक चलखेलको गन्ध पनि देख्छन् थापा ।
नेकपाका नेता तथा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का संयोजक पल्लवराज भट्ट पनि खतिवडाको सरुवाप्रति असन्तुष्ट छन् । साथै उनले कञ्चनपुर बस्दा जनताको मन जित्ने गरि काम गरेकोमा खतिवडालाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले नयाँ आउने सिडिओलाई खतिवडाको अडानबाट पछि नहट्न चेतावनी नै दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘खतिवडाको भन्दा फरक कुरा गरे वा उनको अडान भन्दा पछाडि हट्न खोजे अब आउने सिडिओलाई हामी पनि १ मिनेट कञ्चनपुरमा टिक्न दिने छैनौं । कञ्चनपुरको सिमाना कटाएर कैलालीतिरै पठाइनेछ ।’
याे पनि पढ्नुस गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार दैलेखमा भत्काइए २४१ छाउगोठ
कञ्चनपुरको सिमानामा पर्ने डोकेबजारबाट वर्षौदेखि कैलाली प्रहरीको नियन्त्रण हटाएको, डोकेबजारमा सशस्त्र प्रहरी राखेर भन्सार कार्यालय राख्ने तयारी अघि बढाएको भन्दै उनीप्रति कञ्चनपुरबासिको सहानुभूति छ । यही कारण कैलालीका राजनीतिज्ञ र तस्करको योजनामा उनको सरुवा गराइएको उनीहरूको आरोप छ । गृह मन्त्रालयले सरुवाको सूचना सार्वजनिक नगर्दै कैलालीका राजनीतिज्ञहरूले सिडिओ सरुवा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी साटासाट गर्न थालिसकेका थिए । यसकारण पनि यसमा राजनीतिक चलखेल भएको आरोप कञ्चनपुरबासिको छ ।
कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव बासुदेब जोशीले(विनोद) खतिवडाले कञ्चनपुरलाई लगाएको गुन कहिल्यै नबिर्सने भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनले खतिवडाको सरुवा गरिएकोप्रति निन्दा व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आत्तिएका तस्कर र तिनको दानापानीमा पालिएको केही राजनीतिक भ्रष्ट नेतृत्वका कारण एउटा असल राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई अपमानित ढङ्गबाट हटाइएको विषय निन्दनीय छ ।’
याे पनि पढ्नुस बैतडीमा २१६ थान हतियार संकलन
तर कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नरबहादुर धामीले सिडिओको सरुवालाई नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिएको बताए । उनले नाकाको विषयलाई सिडियोको सरुवाको रुपमा जाड्नु नै गलत भएको उनको भनाई छ ।
गौरीफन्टा नाकामा कञ्चनपुरका सुरक्षाकर्मी खटाइएपछि त्यसको कैलालीमा विरोध र कञ्चनपुरमा स्वागत भएको थियो । त्यसबारेमा अनेकथरि टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला आकस्मिक रुपमा कञ्चनपुरका सिडिओको सरुवा हुँदा त्यस विषयले झन् व्यापकता पाइरहेको छ । यो विवाद कसरी र कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ ? त्यो भने नयाँ आउने सिडिओको कार्यकुशलतामा भर पर्नेछ । त्यसका लागि केहीदिन पर्खनुको विकल्प छैन ।
ट्याग्स: गृह मन्त्रालय, गौरीफन्टा नाका, नुरहरि खतिवडा, रामकुमार महतो